China malefaka amin'ny hoditra boribory spaonjy makiazy vita amin'ny vovoka puff mpanamboatra sy mpamatsy | Dongmei
Sponjy boribory malefaka amin'ny hoditra malemy paosy
Fitaovana: puff puff dia vita amin'ny spaonjy malemy paika, fahatsapana malefaka be sy malefaka, afaka mifidy sy mitazona ny habetsaky ny vovo-dronono, vovoka manaloka, ary vovoka amin'ny vatana, mora apetaka tsara, tsy mandany ny vovo-taninao intsony.
Famolavolana: ny fikolokoloana vatana lehibe dia natao hahafahana mitantana sy mitahiry mora foana, ny famolavolana habe lehibe dia mety hahatonga ny vovoka mifangaro ao anaty hoditra ho haingana sy mora kokoa.
Fampiharana: ny puff fluffffy puffy dia azo ampiasaina amin'ny ankizy sy ny tarehy sy ny vatana ho an'ny olon-dehibe, izay karazan-koditra, menaka, feno, maina, dia tsy hanelingelina na hanakorontana ny hoditrao, tsara asiana vovoka ho an'ny zazakely, mora nosasana raha ampiasaina foana.
Malemy sy mihamalemy: vita amin'ny sponjy velour sy cushiony, fahatsapana malefaka sy malefaka, afaka mifidy sy mitazona ny habetsaky ny vovo-dronono, vovoka manaloka, ary vovoka amin'ny vatana, mora apetaka tsara, tsy reraka intsony ny vovokao.
Mijery tsy misy fotony sy tsara tarehy: ny paiso vovo-tany Dongshen dia manana fijery manja izay manome tsy misy fotony ny vokatra nefa tsy manelingelina makiazy ao ambaniny, ary tsy misy ahiahy sao hianjera ny velour.
Mahafinaritra ny hoditra mora tohina: io puff puff io dia azo ampiasaina amin'ny karazana hoditra, menaka, feno, maina; tsy hanelingelina na hanakorontana ny hoditrao izy ireo, tsara raha asiana vovoka amin'ny vatana ho an'ny zazakely.
Mety ho an'ny fitsangatsanganana sy fampiasana an-trano ary mora ampiasaina amin'ny tanana iray satria fehin-kibo mahery ao an-damosina.
Tena malefaka sy malefaka ny mampihatra aorian'ny fandroana. Ampiasao ity puff zazakely ity mba hampihena ny vovo-jaza vaky amin'ny rivotra.
Mora ny manisy vovoka vatana amin'ny hoditra.
Afaka manompo ho an'ny ankizy sy ho an'ny lehibe.
Mora diovina sy maina: Azo esorina ny masinina, atsipazo ao anaty kitapo fanasan-damba fotsiny izy ireo ao anaty masinina, na fanasana tanana amin'ny savony; manantona amin'ny toeran'ny rivotra misy rivotra hamela azy ho maina, tsy mora ny miova endrika amin'ny fanasana mahazatra.
TANDREMO! Satria loko fotsy madio izy io, mora ny mandoko amin'ny akanjo hafa, azafady misaraka amin'ireo akanjo miloko mainty.
Teo aloha: Dongshen gourd endrika matihanina fampiharana fototra fanaingoana spaonjy blender
Manaraka: Hozatra matihanina makiazy malefaka sy maivana ho an'ny fampiharana fototra
Fitaovana borosy makiazy, Manaova borosy, Faritra fiharatra, Mametraha makiazy borosy, Barber Shave, borosy makiazy napetraka,